"Tan oo kale hore ayey iigu dhacday" - Caasimada Online
Home Warar “Tan oo kale hore ayey iigu dhacday”
“Tan oo kale hore ayey iigu dhacday”
Shalay waxaa daabacnay dhambaal inooga yimid gabar Soomaaliyeed oo talo doon ah. Dhambaalkaas ayaa ahaa kii ugu horeeyay barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay ILA TALI AQRISTE, kaasi oo aqrsitayaasha ay tallooyin kusoo weydiisan karaa aqristayaasha kale, inagana aan daabaci doono, waxadana kusoo hagaajin kartaan caasimada@live.com.
Halkan ka arag dhambaalkii shalay.
Haddaba inta badan tallooyinkii la siiyay Ayaan waxaa lagu soo qoray qeybta comments-ka, hase yeeshee gabar Soomalaiyeed ayaa taladeeda inoogu soo dirtay email ahaan, waxaase cajiib ahaa sheeko ayada ku dhacday oo ay soo raacisay, oo aan halkan idin kugu soo gudbineyno.
FG: Gabadhan, magaceeda, halka ay joogto iyo akhbaarteeda gaarka ah masoo daabaceyno, si aan u ilaalino privacy-geeda, laakin waa tan sheekadeeda cajiibka ah.
Waxaan la talinayaa Ayaan. inta aan talada usoo jeedin waxaan rabaa in aan u sheego 2 dhacdo oo tan la mid ah inaan la kulmay.
Mid waxa aan ku sugnaa Jaceyl aan layla wadin 6 sano. waagaas aniga oo arday ah lacagta shopinka laygu tala galay taleefon lee ku dhameen jiray. ima soowaco, mar mar igama qabto mana igu soo celiyo. waxaan saas ahaadaba waligay kuma qabsan maa isoo wacdid, maa iga qabatid waxaan is lahaa mar uun ayaad kasban doontaa, wuxuuo mar marsiisyo iiga dhigay inuu lahayn mobeel, waxaan usoo gaday moobeel anigaba ma haysan moobeel, taleefanada leeleenka ayaan isticmaalaa. maalin maalmha ka mid ah waliba habeen maqrib ah ayaan ku xanaaqay waxaan si ka fiirsi leheen u iri macsalaamo. Isna wuxuu i dhahay nabadey. Alla fiicnaan leheedaa hadaan ka dhabeen lahaa. isla markii naxdin, madax xanuun iyo matag aan isku daray. Waxaa jirtay inta aan Jaceylka u qaaday ninkan subax ma quraacdo marka aan cadayga afka galiyo waan matagaa. waxaa ila saxiibay walwal, waxaan ka tiriyay gabay. Waa qiso dheer u qalanto in buug laga diyaariyo. Isla habeenka markaan taleefanka isku la muranay oo macsalaamo iyo nabaday is dhahnay waan gagsan waayay waan ku noqday wan wacay waan raali galiyay anoo ooyayo asne wuu iga aqbalay.
Kadib 2 sano wax isbadal ama hormar ma leh hadalkeena aniga lee iska hadlo asna waa dhageesto lee, way ii cuntami waysay. waxan ahay gabadha gabdhaha xaafada ugu jirto runtii dhankasta, qurux iyo aqlaaq iyo aqoon .Wallaahi isma faaninayo. waayo aad ayaan u xishood badnaa ma jecleen haasaawaha badan, ninkan aan jeclaaday waligiis muusan iman xaafadayda, hal maalin waxan ku sheekaysanay gaari dhexdiisa anne kuma qabsan aan isku imaano waji ka waji waayo waanba ka qajilaa. maalintii danbe waxaan la yaabay ragaa sida ay ii daba cararaan oo aad iigu qalmo waliba aqqon leh dhaqaalana heesta naagana aan qabin, iyo nin aan shaqayn waxna aan baran aan ugu sabri la’ ahay hada waxaan fahmay in aan isku leebal eheen hadana uusanba irabin naftayda intaas aan ku qanciyay.
Maalin ayaan waydiiyay anigoo dhahay hebal abowe ma cabsanee? markaas ayuu iigu jawaabay haa. ayadoonan muran iyo is qabqabsi imaan waxaa igu soo dhacday run iyo been waxeyba ahaato nin afkiisa ka qirtay inuu cabsanayo maxaa waqti ugu lumisaa. kadib waxaa iri ok. waayahee hadad cabsanaysid aan is fasaxno ok ayuu igu yiri, waxa kale oo uu iisheegay in sidii walaashiis oo kale oo ii wanaajiyo. anne waxaan u sheegay inaan si caadi u xiriirin doono. nin haduu ku dhaho sidii walaashey ayaan kuu wanaajinaa dan kaama lahan ogow.
Taas meesha ayay ku dhamaatay ilaah ayaa mahadleh Jaceylkaas waan ka BOGSOODAY ANOO 16 JIR ah ayuu i helay waayo aragnimana rag uma leheen, Dabeecadayda xaga raga aan ka aamisnaa ma wanaagsaneen waxaan moodaa ninkii shukaansi iigu yimaado cayaal suuq. laakiin midka aan si caadi isku barano igu soo dhiiran isla markaa naagana aan ku arkin kuna maqlin waxaan moodaa nin fiican asturan. walow aniga aan shukaansi badneen, ragana waxaan ka helaa midka ila midka ah. Mar labaad hadana Jaceyl ayaan u qaaday mid kale markaan waxaan ku shekaysanaa masanger laakiin ima soo waco. hadana wacitaan ka waa aniga leee, jaceekiisa iguma fogaan sidii kii kale waxaad moodaa inaan hada waaya arag ahay. mudo sanad ah markaan fahmi waayay hal mar ayaan u jaray xiriikii taleefankana waan badashay iimeelkiisana block ayaan saaray. waxaan bilaabay xiriir kale nasiib wanaag waxa uu noqday xiriirkayga sadaxaad mid miro dhalo habeen iyo maalin waan is wacnaa asxaabtayda waan ka go’ay. dhoor bil kadib waan is mehersanay. hadda waan is jecelnahay ninkayga waxaan u hayaa dhowr caruur ah. msha alaah saaaxiibaday oo dhan badanaa waxay i dhahaan nasiib badanidaa nin ku jecel ayad heshay dabcan anna waan jeclahay.
Marka waa in aad heshaa qof aad xiriir la samaysid oo aad qaab ahaan marka hore ku qanac santahay waxaa macquul ah in dabeecadiisana aad ku qanci doonto. laakiin Jaceylka dhabta ah sahal laguma iloobi, waa qaraar badanyahay hana u malaynin raga oo dhan in ay wada xun yihiin midsa ogow raga qaar ma ahan dhamaan, waliba badankood marka ay dareemaaan naagta in ay jeceshay waa laba kacleeyaan malaha wax xun ayay iska dhaadhacsiiyaan ma ogi mise qiimahaaga ayaa la yaraanaa oo dhaqamadii hore ayay heestaan. Si uusan kuu soo wicin 2 arin ku dhaqaaq iska dhaadhacsii inuu yahay nin aan kuu qalmin oo xun xiriikiisa jar iimeelkiisa block saar hadii aad ku xiriiri jirteen. taleefankaaga badalo. hadii qof aad saaxiibo tihiin ugu sheekaysay wanaagiisaa markaad jartid wuxuu ku dhihi doonaa hebel wuu fiicanyahay taas waxa ay adkeenaysaa inaad ka sabri wayso, u sheeg qof kaas inuusan fiicneen si uusan qalbigaaga usoo laba kacleen.
waxaad ku dadaashaa qur’aanka iyo tasbiixda habeenkii salaatu laylka inuu ilaah nin wanaagsan aad ku qanacdaa calafka kuugu daro awlaad wanaagsan kaa siiyo. hadii aad heeso dhagaysato iyo buugaagta Jaceylka iska jooji iyo filimanata ama musalsalada.
nin aadan rabin haasawa been hala samayn mustaqbalkaaga iyo sumacadaada iyo aaqiradada uma wanaagsano.
si aad maskaxdaada u ilaaliso ha walwalin hana fikirin bulshada dhex gal la sheekayso qur’aanka dhagayso hadii aad awoodo wax barasho isku mashquuli.
lacala haduu kula soo xiriiro
Ilaa aad ka hubiso meesha uu taaganyahay oo balan adag kuu qaado oo kugu calacalo haka yeelin hadii aad yeeshana ku xir inaad aqal gashaan waalidkaa kaa doonto haduu dhab ka tahay.
waxaa macquul ah dhowr arin
in uu gabar kale xiriir la leeyahay ama uu jecelyahay aysan ayada jecleen marka luda jecli lafta jecli ay ka tahay
in uusan dhaqaala haysan oosan awoodin in uu ku biilo ama aroos kuu dhigto taas waad ka xaqiijin kartaa
in uu adiga kaa shakisanyahay oo isleeyahay tan ma wanagsana dhaqankeeda waa in aad is giijisaa hadaladaada koontarool maala yacni hadku hadlin
tus inad ka maaranto
waa in goo ‘ aan iyo karti yeelataa
Ilaah niyada hakuu adkeeyo”
Waxaa qortay walaal Soomaaliyeed.